Imibuzo Yokubuza Ngexesha loLwazi lwezoBomi
Umzobo Wendlela Yokubuyisela iincwadi zeeNcwadi, iiCakes zeNkundla kunye nokunye
Iiseshoni zoqhelaniso kwiikholeji ziyindlela ekhohlakeleyo kubafundi abatsha nabazali babo ukuba bafunde ngobomi bezemfundo nabafundi. Musa nje ukuchitha lonke ixesha lakho kuhambo olujikelezayo. Phuma iyure okanye ezimbini, yenza uvavanyo oluncinane uze ufumane enye imibuzo, engacacanga imibuzo ephendulwayo. Phakathi kwabo?
Izinketho zeencwadi zokubhalwa kwintlawulo: Nangona umntwana wakho uthengisa ubuninzi beencwadi zakhe ezibuhlungu kwi-intanethi, ngeendawo zokuthenga ezithengiweyo zendawo-khangela kwabo kufuphi nekampus-okanye ngokusebenzisa inkampani yokuqashisa ibhuku, amathuba okuba uya kugqiba ukuthenga kwi-bookstor . Kukulungeleka, kugcinwe kakuhle, kwaye inokuba yindawo ephela ephethe iincwadi ezininzi ze-esoteric kunye ne-anthologies ezikhethiweyo ezifunwa ngabafundisi. Ngoko uguquka nge-bookstore kwaye ufumane ukuba ungayifaka i-akhawunti okanye uyihlawule ithebhu, okanye ukuba umntwana wakho angakhokhela ukuthenga kwi-akhawunti yakhe yomfundi-apho kwenzeka, kuya kufuneka uxoxe naye malunga nokuzibamba .
Amaqebelengwane okuzalwa: Ezinye iikholeji zinikela ngokukhethekileyo ukuzalwa komhla wokuzalwa ngokubakho kwiihholo zabo zokutya okanye iinkonzo zobomi bezemfundo, ngoko ukhangelelanise amathuba apho u tyelela i-campus ngexesha lokuqhelanisa. I-Stanford ihambisa amaqebelengwane okuzalwa kwi-dorm, umzekelo, nabazali kwiYunivesithi yaseDelaware bangahlela ukutyelelwa ngothatyathwa yi-mascot yesikolo.
Izindlu zekhofi, ii-movie zoonobumba: Ukhangele indawo ejikelezileyo yama-hangout abafundi - izindlu zekhofi, ii-burrito bars, ii-movie zoonobumba. Thatha izitifiketi ezimbalwa zesipho ngoku kwaye unokumangaliswa kunye nabo abaselula. Ikhadi lesipho se-$ 20 kwi-pizzeria kufuphi ne-campus okanye i-$ 5 kwi-latte hotspot zizinto ezintle zokuhlaselwa kwizikole zokunakekelwa kweekholeji.
Amahotele kunye neendawo zokudlela ezilungileyo: Ukuba awuhlali ujabule nehotele apho uhlala khona ukuze ufunde isiqhelo, eli lixesha elifanelekileyo lokujonga ezinye iindlela ngexesha elizayo. Ngelixa ulapho, khangela iindlela zokudlela ezintle. Mhlawumbi uza kufuneka ukunyuka okufutshane emva kokuhambisa umntwana wakho kwimibhobho, okanye ubuncinane indawo kunye nohlu lwewayini olufanelekileyo. Yaye xa ubuya ukutyelela kamva, umntwana wakho uya kufa ngenxa yokutya ukutya.
Imilinganiselo yegumbi leDorm: Awunayo inqwelo ngokujikeleza iteksi yokulinganisa, kodwa gqiba ixesha elithile ukujonga ibumbi kwiholide lakho. Iibhedi zeDorm zivame ukukhwela phezulu kuneemibhede eziqhelekileyo, kodwa jonga i-mechanism ephethe i-mattress kwisakhelo kwaye ubone ukuba iyakuthi iguquke. Emva koko ulinganise umgama ukusuka kumgangatho ukuya kumattile - vele ume eceleni kwayo uze ubone apho umgangatho we-mattress uhlasela umlenze wakho. Yiloo ndlela ubude bomntwana phantsi kweebhegi zokugcinwa kwebhedi ezinokubakho - ngaphezulu xa i-mattress isesikhundleni sayo esiphantsi. Khangela indawo yekhabethe. Khangela ukuba kukho isibuko kunye nebhodi yeendaba. Khangela kwiindawo zokuhlala - ngaba abafundi bagcina iindawo zabo zangasese kwindawo yokugcina okanye bawuhlehlise? Cela isikhokelo sakho sokutyelela ukuba zonke iindleko zineendawo zokuphumla ezifanayo kunye nefenitshala yendawo.
Ukuxhaswa kweTekisi: Ekugqibeleni, phanda inkxaso yenkxaso yezobugcisa kubafundi, kubandakanywa ukufumaneka kwinqanaba xa umfundi wekhompyutheni ephazamisa ngo-2 ekuseni ngenxa yokuba uyazi umntu wokuqala oza kubiza, kungakhathaliseki ukuba yiyure.
Phrinta uluhlu olukhethiweyo lokuthabatha.
Iimfazwe zeMfazwe yaseMexico naseMerika
I-Biography ye-Booker T. Washington
I-Biography kaStephen Hawking, iFizikiki kunye neCosmologist
I-2,000 Yard Club yebhola leKholeji